“စဉ်းစား ပေးပါဦး” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » “စဉ်းစား ပေးပါဦး”
Posted by YE YINT HLAING on Oct 8, 2012 in My Dear Diary | 23 comments
ဒေါင်း ထားတဲ့ သီချင်း တွေထဲ က ကိုထီး ရဲ့ ” စဉ်းစားပါဦး ” သီချင်း ကို ( ၃ ) ခေါက်လောက် နားထောင်ရင်း လက်ရှိ ကိုယ့် အခြေအနေမှာ အကောင်းဆုံးဘယ်လို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရင်ကောင်းမလဲ ၊ ဘယ်လိုစိတ်မွေးပြီး နေ့စဉ်ရပ်တည်ရမလဲ ဆိုတာကို အပြန်အလှန် စဉ်းစားနေမိတယ် ။ အဲဒီလို စဉ်းစားနေရင်း ကနေ ပို့( စ ) တင်ပြီး ရွာထဲက အမျိုးတွေဆီကနေ အကြံညဏ် တောင်းတာ ပိုကောင်းမယ်လို့ တွေးမိလို့ ကိုထီးသီချင်း နာမည်လေး ” စဉ်းစားပါဦး” မှာ တောင်းဆိုမှု လေး ထည့်ပြီး ” စဉ်းစား ပေးပါဦး ” ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေး အဲဒီ ရဲ့ အောက်မှာ အကျိုး အကြောင်း စုံလင်စွာ အရင် ပြောပြရမှာက ဒီလိုပါ —–
ကျွန်တော့ အထက်မှာ အသက် ( ၅၂ ) နှစ် အရွယ် ရှိတဲ့ Plant တာဝန်ခံ တစ်ယောက် ရှိတယ် ။ အဲဒီ Plant တာဝန်ခံနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဌာန ရဲ့ အကြီးဆုံး လူဟာ တနိုင်ငံ တည်းသားတွေလည်း ဖြစ်တယ် ။အဲဒီ ဌာန လူကြီး က ကျွန်တော့ ကို ကုမ်ပဏီ လက်တော့ တစ်လုံးနဲ့ ကုမ်ပဏီ အီးမေး လိပ်စာ ပေးပြီး သူ့ဆီကို နေ့စဉ် ဘိလပ်မြေ ၊ ကျောက် ၊ သဲ ၊ Chemical နဲ့ Plant နဲ့ သက်ဆိုင်သမျှ အားလုံးကို Report အီးမေးပို့ခိုင်းတယ် ။ ဒီအလုပ် တွေက Plant တာဝန်ခံ ရှိနေတဲ့ အတွက် Plant တာဝန်ခံ သူ လုပ်ရမဲ့ အလုပ်တွေပါ ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် လည်း ကိုယ့်ဌာန ရဲ့ အကြီးဆုံး လူဖြစ်နေတော့ကာ ငြင်းလို့မရနိုင်တာကြောင့် ဒီစာရင်းတွေ နဲ့ သက်ဆိုင်တာတွေ လုပ်ရပါတော့တယ် ။ အဲဒီ လို လုပ်နေရင်း ဒီနှစ် မေလ ( ၃ ) ရက်နေ့ နေ့ခင်း မှာ ဘိလပ်မြေ ပို့တဲ့ ကားဒရိုင်ဘာ တွေနဲ့ တာဝန်ခံဟာ ညှိပြီး ဘိလပ်မြေ ကို လုပ်စားနေသလို အဲဒီနေ့မှာပဲ ကျောက် အဝင် အထွက် ကို စစ်ဆေးကြည့်တော့ ကျောက်မီတာကျူ့ ( ၄၀၀ ) ပျောက်နေတာကို တွေ.ရတယ် ။ ဒါနဲ့ ဒီအကြောင်းတွေကို ဌာန လူကြီး ကို သတင်းပို့တယ် ။ သူက ကျွန်တော့ ကို ပြောတယ် — သူ့တာဝန်ခံ ကို ယုံတယ်တဲ့ ။ ဒါနဲ့ အဲဒီ အချိန် က စပြီး ကျွန်တော် လည်း လက်ခံစာရင်း လုံးဝ မလုပ်တော့ဘူး ။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စစ်ဆေးပြီး လက်မခံ ရပဲ Plant တာဝန်ခံ လက်ခံထားသမျှ ကို ပြည့်စုံပါတယ် မှန်ကန်ပါတယ် ဆိုပြီး စာရင်း သွင်းလိုက်ရင် ကိုယ့်လည်ပင်း ကို ကြိုးကွင်း စွပ် သလို ဖြစ်မှာ ဆိုးလို့လေ ။ ဒီတော့ ဌာန လူကြီးက သူ့ဆီ နေ့စဉ် လက်ခံ- အသုံး နဲ့ အကျန် စာရင်းအပြည့်အစုံ မပို့ ရ ကောင်းလား ဆိုပြီး အီးမေး ပို့ ပြီး ဖိအား ပေးပါတော့တယ် ။ ကျွန်တော် လည်း ထုတ်ချင် ထုတ် ပြုတ်ချင် ပြုတ်ဆို ပြီး ပေပြီး မပို့ဘူး ။ ဒီတော့ သူဘာလုပ်လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော့ရဲ့ နှစ်ပြည့် မှာ အနည်းဆုံး Bonus လုပ်ပစ်လိုက်တယ် ။ တခြားသူတွေကို သုံးလေးငါး လစာတွေ Bonus ပေးပြီး ကျွန်တော့ ကို တစ်လခွဲ စာပဲ ပေးတယ် ။ August လကုန် မှာပေါ့ ။ ပြီးတော့ သူက ပြောသေးတယ် ။ မင်း – Bonus နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်သူနဲ့မှ မတိုင်ပင်နဲ့တဲ့ ။ စာရင်း တွေ ကိုလည်း နေ့စဉ် Report ပို့ပါတဲ့ ။ ကျွန်တော် ကလည်း သူ့ ကို အပြတ် ပြောလိုက်တယ် ” မပို့ နိုင်ဘူး ” လို့ ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် သူ့ဆီသာ မပို့တာ —Plant Control Computer Record File ထဲက တိကျတဲ့ ဘိလပ်မြေ ၊ ကျောက် ၊ သဲ နဲ့ Chemical အသုံးတွေကိုစုထုတ်ပြီး
သိမ်းထားတယ် ။ ခုဆိုရင် စာရင်း ကွာဟမှုက ဘိလပ်မြေ အိတ် ပေါင်း ( ၂၁၉၃၀ ) အိတ် — ကာလတန်ကြေး US$ ( ၁၄၂၅၄၅ ) ဒေါ်လာ ဖိုးရှိတယ် ။ ဒါဘိလပ်မြေ တစ်ခု ပဲ ရှိသေးတယ် ။ ကျောက် ၊ သဲ မပါသေးဘူး ။ အဲဒီလို သူတို့ လုပ်စားလို့ အများကြီး ဟ နေပြီဆိုတာကို တာဝန်ခံ ကလည်း သိတော့ September လထဲမှာ ဌာန လူကြီးကို ဖုန်းဆက်တယ် ။ ဒီရက်ပိုင်း မှာတော့ ဌာနလူကြီး က အားလပ်ခွင့် ( ၁၈ ) ရက်သွားနေလို့ ကျွန်တော့ဆီ ဘယ်လိုဖိအားမှ မရောက်ခဲ့ဘူး ။ ခု သူပြန်လာပြီ ။ ဘာတွေ လုပ်ဦးမယ် မသိ ။ ကျွန်တော် ဘက်က လုပ်စရာ တခု ပဲရှိတယ် ။ အဲဒါက ကုမ်ပဏီ ပိုင်ရှင်ဆီ ကို Computer Record အချက်အလက် တွေ ထုတ်ပြီး အီးမေးနဲ့ ပို့ဖို့ပဲ ။ ဒီအတွက် ကိုယ်နဲ့ ရင်းနှီးပြီး လုပ်သက်များတဲ့ စီနီယာ ကြီးတွေနဲ့တိုင်ပင်ကြည့်တော့ သူတို့က ကျွန်တော့ ကို ပြောတယ် ။ မလုပ်ခင် ” စဉ်းစားပါဦး ” တဲ့ ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် အချိန်ပြည့် ဒီအတွက်ပဲ စဉ်းစားနေမိတယ် ။ ကျွန်တော် စဉ်းစား သမျှ ကလည်း ကိုယ် မရှုံးနိမ့်အောင်ထက် သူတို့ ကို လှလှပပ ပြန်လည် ထိုးနှက်နိုင်ဖို့ပဲ ။Computer Automation ရဲ့ Record File ထဲမှာရှိတဲ့ တိကျသေချာတဲ့ အချက် အလက် တွေ က ကျွန်တော့ အတွက် အကောင်းဆုံး သက်သေတွေပဲ ။ ကုမ်ပဏီ ပိုင်ရှင် ဆီကို ပို့သင့် မပို့သင့် ဆိုတာ သူတို့ပြောသလို ကျွန်တော် ပြန်စဉ်းစား နေတယ် ။ ဘာကြောင့် သူ တို့ က စဉ်းစားပါဦး လို့ဆိုတဲ့ အကြံမျိုး ပေးရသလဲဆိုတာကိုလည်း စဉ်းစားမရဘူးဖြစ်နေတယ် ။ ကျွန်တော် တွေဝေနေတာလား ?????????? စဉ်းစားပေးကြ ပါဦး ဗျာ !
ဖတ်ရှုအားပေးဝိုင်းကူစဉ်းစားပေးသူများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျား !
ကိုယ့်အမှားလိုဖြစ်နေမယ်…တစ်အားတင်းသွားရင်လည်း ရေးထားပုံအရ သူတို့လူချင်းမို့
ပထမ ဆုံး လူ အဖြစ်နဲ့ ကျွန်တော့ အတွက် တွေးပြီး မန့် ပေးသွားတဲ့ မနှင်းနှင်း ကို ကျေးဇူးပါ ! လုပ်သင့် လုပ်ထိုက် တာတွေ ကျွန်တော် လုပ်နေပါပြီ !
ဟုတ်ကဲ့..အလုပ်အကြောင်းမသိပေမယ့် ကိုရဲရင့်လှိုင်က စိတ်ထက်ပုံရတော့
အမှန်တရားဖက်က ရဲးရဲးကြီးရပ်တည်လိုက်စမ်းပါ ဒီအလုပ်မလုပ်ရလို့လဲ ထမင်းမငတ်ပါဘူး
ကိုယ့်ဖက်ကနစ်နာနေမှန်းသိရက်နဲ့ အလျှော့ပေးနေမယ်ဆိုရင် ဒီလိုလူတွေဟာလဲ
ဒီလိုလုပ်စားနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါ့ကြောင့် အမှားပေါင်းများစွာနဲ့နေမှာထက် အမှန်တရားတစ်ခုကို
မနက်က အလုပ် ရှုပ်နေလို့ မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး ! ဟုတ်တယ် ! ကိုဘိုင်း ပြောသလိုပဲ ! ” ဒီအလုပ်မလုပ်ရလို့လဲ ထမင်းမငတ်ပါဘူး ” ဆိုတာ ကျွန်တော် ကြိုက်တယ် ! ခု ကျွန်တော် တို့ နိုင်ငံမှာလည်း ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ ပြန်ပြီး ခေါင်းထောင်လာပြီ ! ကျွန်တော် တို့လို ကွန်ကရစ် ပလန့် အော်ပရေတာ တွေအတွက် အလုပ်ကောင်းလာပါပြီ ။ ဒီမှာလောက် ငွေမရပေမဲ့ ကိုယ့်ဆီမှာ ထိုက်သင့်သလောက်တော့ ရနေပါပြီ ။ မိသားစု နဲ့လည်း နီးနီးကပ်ကပ် နွေးနွေးထွေးထွေး နေနိုင်တယ်လေ ! ဒါကြောင့် ကိုမှန်တဲ့ အတိုင်း အဆုံးထိ လျှောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ် ။
မနက်က အလုပ် ရှုပ်နေလို့ Reply မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး! လို့ ဖတ်ပေးပါဗျာ! ကျေးဇူးပါ !
ဒါပေမယ့် ကျုပ်သာဆိုရင်.. စာရင်းတွေပို့ခိုင်းရင်.. တာဝန်အရ.. ပို့ပေးမှာပဲ..
ကိုယ်က စာ၇င်းပို့သူလေ..။ တာဝန်ခံသူမှမဟုတ်တာ..။
ကိုယ်က.. စာရင်းပို့သူလေ..။ ပစ္စည်းအ၀င်အထွက်.. စစ်ဆေးသူမှ မဟုတ်တာ..။
ဒါကို.. ကုမ္မဏီက လူတိုင်းသိအောင်.. လုပ်ထားဖို့ပဲလိုတယ်ထင်မိတယ်..။
မသကာ.. ကိုယ်စာရင်းပို့ချိန်မှာ.. အကောင့်တန့်ဆီတစောင်.. ကုမ္မဏီအကြီးဆုံးဆီတစောင် cc တွဲပို့နေမှာပေါ့…။
စာရင်းကွာရင်လည်း.. ကွာနေကြောင်း ပို့ပေးမှာပေါ့..။
“ကိုယ်က.. စာရင်းပို့သူလေ..။ ပစ္စည်းအ၀င်အထွက်.. စစ်ဆေးသူမှ မဟုတ်တာ..။”
အထွက် က ကျွန်တော် စစ်ဆေး ရတာပါ ။ အထွက် ( အသုံး ) ကို Computer က တိတိကျကျ အသေးစိတ် Kg နဲ့ ပြတယ် ။ ပြီးတော့ Record File မှာ Detail Record လုပ်ထားတယ် ။ အဝင် တခု ပဲ ကျွန်တော် လက်ခံခဲ့တာ မဟုတ်ကြောင်း ခိုင်လုံ တဲ့ အထောက် အထားတွေ နဲ့ ရေးပြီး ပို့မှာပါ ။
ကျွန်တော့ အတွက် ဝိုင်းကူစဉ်းစား ပေးကြတဲ့ မနှင်းနှင်း ၊ ကိုဘိုင်း ၊ သူကြီး နဲ့ အန်ကယ်ကြီး ကို ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ။ သူကြီး ပြောသလို ကုမ္မဏီအကြီးဆုံးဆီတစောင် cc နဲ့ တွဲပို့ခွင့် မရဘူးခင်ဗျ ! ဒါမျိုး သွားပို့လိုက်လို့ က တော့ အစောကြီး ကတိုင် ပြသနာ တက်နေလောက်ပြီ ။ တခုတော့ ရှိတယ် BCC နဲ့ ကုမ္မဏီအကြီးဆုံးဆီတစောင် သူမမြင်အောင် တွဲပို့လိုက်မယ် ။ သေချာပေါက် Company က Action တခုခု ယူလိမ့်မယ် ။ ဒီနေ့ည တစု တစည်းတည်း ပို့ဖို့လုပ်ထားတယ် ။
စာရင်းဆက်မပို့ ဘူးဆိုရင် ၊ ပြဿနာတက်တဲ့အခါ ၊ ကိုယ်ပါ ကြံရာပါ ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားလို့ 
ဖွင့်ဖွင့်ချင်း ကိုပေ ရဲ့ ကျွန်တော့ အတွက် တွေးပူမိတယ် ဆိုတဲ့ မန့် ကိုတွေတော့ စိတ်အင်အား တမျိုး ကို ခံစား ရရှိလိုက်တယ် ။ ကျေးဇူး ပါ ကိုပေ ! ကျွန်တော် ဒီနေ့ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက် တာတွေ အကုန် လုပ်ထားပြီးပါပြီ ။ ဒီနေ့ နေ့ခင်း မှာပဲ ရုံးချုပ် က သတင်း တခု ရတယ် ။ သူတို့ လည်း ဝယ်ယူ စာရင်း ထဲ ကနေ အိတ် ( ၁၆၀၀၀ ) ပျောက်နေတာ ကို အတည် ပြုပြီး ဖြစ်သွားပြီ ။ ကျွန်တော့ စာရင်း နဲ့တော့ ကွာနေသေးတယ် ။ မကြာခင် မျက်နှာစုံညီ ရှင်းရ လိမ့်မယ် ။ တခြား ဌာန က လူကြီး တယောက် ၊ အကောင့် ၊ လော်ဂျက်စတစ် စတာတွေ က ကျွန်တော့ ဘက်မှာ အမှန်အတိုင်း ရပ်တည်ပေးဖို့ ရှိနေပါတယ် ။ ကျွန်တော့ အဓိက တာဝန် က ကုမ်မဏီက ခန့်ထားတဲ့ အော်ပရေတာ ဆိုတဲ့ အတိုင်း ကွန်ကရစ် ဖျော်ပေးဖို့ပါ ။ ကျွန်တော့ အလုပ် ကျွန်တော် လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဒါတွေကို ရေတွက် ပြီး လက်မခံ နိုင်ဘူးဆိုတာကိုလည်း သူတို့ နားလည် လက်ခံ ပါတယ် ။ ကျွန်တော် မရောက်ခင် အရင် တွေမှာလည်း သူတို့ ဒီလိုခြစား နေတာ ရှိခဲ့ တဲ့ အကြောင်း သိရတယ် ။ အရင် က အကြောင်းတွေ သိတဲ့ လူဟောင်း ဖိလစ်ပိုင် တစ်ယောက် ကို လည်း အလုပ် ကနေ ထုတ်ပစ် ဖို့ ကျွန်တော့ ဌာနလူကြီး လက်ရှိ ကြိုးပမ်း နေတယ်ဆိုတာ အဲဒီ ဖိလစ်ပိုင် က ပြောပြလို့ သိရတယ် ။ ဒါကြောင့် ဖိလစ်ပိုင် တွေ လည်း ဌာန လူကြီး ကိုတင်းနေတယ် ။ ကျွန်တော် နဲ့ အဲဒီ ဖိလစ်ပိုင် ကို အကာအကွယ် ပေးမဲ့ လူကြီး က လူဖြူ တစ်ယောက်ပါ ။ မင်းတို့ နှစ်ယောက် ပြန်စရာ မလိုဘူးလို့ သူက ပြောတယ် ။ ကျွန်တော့ ဆီ က အချက် အလက် တွေ ကို လည်း အီးမေး နဲ့ သူ့ဆီပို့ခိုင်းလို့ ကျွန်တော် ပို့ပေးထားတယ် ။ အမှန် ကို အမှန်အတိုင်း ဖြစ်အောင် သူကူညီ နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်တယ် ။
အမှန်တရားကိုပြောသင့်တယ်လို့ အကြံပေးချင်ပါတယ် ။ မပြောဘူးဆိုရင်လည်း အဲဒီအလုပ်မှာရေရှည်မလုပ်သင့်တော့ပါဘူး ။
ဟုတ်ကဲ့ ! ကျွန်တော် ဒီနေ့ပဲ စလုပ်နေပါပြီ ! Right To Fight ဆိုပြီး အားပေးတဲ့ သူတွေ နဲ့လည်း ကြုံတွေ ခဲ့ရပါတယ် ။ ကျွန်တော့ အတွက် စဉ်းစား ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ !
uncle gyi ပြောတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်….။ ဌာနလူကြီးက ခင်ဗျားကိုပိုယုံလို့ခိုင်းတယ်ဘဲထင်ပါတယ်။ သူ့လူသူယုံရင်အစကတည်းကခိုင်းမယ်မထင်ပါ.။
ဟုတ်ဘူးဗျ ! ဒီနေ့ မှပဲ တော်တော် ဇတ်ရည် လည် သွားတယ် ။
“ဒါကို.. ကုမ္မဏီက လူတိုင်းသိအောင်.. လုပ်ထားဖို့ပဲလိုတယ်ထင်မိတယ်..။”
အဲဒီ သူကြီး ပြောတဲ့ အကြံ အတိုင်း ဒီနေ့ မနက်ပိုင်း ရုံးပိုင်း ဆိုင်ရာ က တာဝန် ရှိသူတွေ ကို မခိုင်တဲ့ ကြိုးပြတ်ကွာ ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးနဲ့ ဝင်တွေ.တယ် ပြောတယ်။ အီးမေး ပို့တယ် ။ ကိုယ့် လို ခံစား ခဲ့ရတဲ့ သူကလည်း ပြောတယ် ။ ဌာနလူကြီး အပါအဝင် သူတို့အုပ်စု က လူညီညီ နဲ့ လုပ်စားနေတာ ကြာပြီတဲ့ ။ လူမျိုးရေး အတွေး ပါမှာ ကို မလိုချင် လို့ ကျွန်တော် မပြောပဲ ချန်ထားတာ ။ သူတို့ အုပ်စု ဆိုတာ ကုလား အုပ်စု ပါ ။ တယောက် နဲ့ တယောက် ဖုန်း နဲ့ပဲ နောက်ကွယ် ကနေ ဆက်သွယ်နေ ကြတယ် ။ ဒီလိုမျိုး ပြသနာ ပေါ်နိုင်တာမို့ ပြသနာတက်လာရင် ပိုရှုပ်ထွေး သွားအောင်လို့ မဆိုင်တဲ့ ကျွန်တော့ ကို ကြားခံ ခိုင်းထားတာပဲ ! ရှုပ်ထွေး လာတဲ့ အချိန် ကျွန်တော် ဘက်က မရှင်း နိုင်ရင် ပိုရှုပ် သွားအောင် လို့ပေါ့ဗျာ !
ကျွန်တော့ အတွက် စဉ်းစားပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ !
မောင်ရဲ ရေ –
အဲဒီလို နေရာတော်တော်များများမှာ ဒါမျိုးတွေ မကင်းကြတာသတိထားလိုက်မိတယ်။
မင်းအတွက် ဆိုးကျိုး မများရင်တော့ ပြသနာ ကို ထိပ်တိုက်တွေ့ဖို့ အားပေးမိမယ်။
မင်းကိုပါ ထိခိုက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ မျိုးဆိုရင် စဉ်းစားပါဦး လို့ဘဲ ပြောချင်တယ်။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
အရီးရေ ! မနေ့ က ည ( ၁၂ ) နာရီ ကျော်မှာ ကျွန်တော့ ဆီကို cc နဲ့ တရား ဝင် ကွာနေတဲ့စာရင်း ရုံးက အီးမေး ဝင်လာပါတယ် ။ တိုက်ရိုက် ကတော့ ကျွန်တော့ ဌာန လူကြီး ဆီကိုပေါ့ ။ သူလည်း ရုတ်တရက် မို့ လက်ညှိုး ထိုးဖို့ ပြင်ဆင် မထားရ သေးတော့ စက်အစိတ် အပိုင်းတွေ မှားယွင်း ပြီး ဒီ Material တွေ ပိုပါသွား ပျောက်သွားတာပါ လို့ ဖြေသဗျ ! သူ အဲဒီလို ဖြေလိုက်တာဟာ ဒီစက် တွေကို ကိုင်တွယ် အသုံး ပြု မောင်းနှင်စောင့်ကြည့်ရတဲ့ ကျွန်တော့တာဝန် မကင်းပါဘူး ။ ဒီနေ့ မနက် ( ၇ ) နာရီ ခွဲမှာ ပြင်ပ ကုမ်မဏီ က ငှါးရမ်းသုံးစွဲ စစ်ဆေး မဲ့ Technician နှစ်ယောက် ရောက်လာတယ် ။Plant နှစ်လုံး မှာ အခု သူတို့ တစ်လုံး စစ်ဆေးပြီးသွားပြီ ။ အဖြေ က good ! ။ ဘယ်အစိတ် အပိုင်းမှ မချွတ်ယွင်းဘူး ။ ခု နောက်ကျန်တဲ့ Plant တစ်လုံး ကို စစစ် နေပြီ ။ ဒီ တစ်လုံး လည်း အဖြေ က good ! ဆိုရင်နှစ်လုံးစလုံး ကောင်းမွန်တဲ့ အကြောင်း စစ်ဆေးထားတဲ့ အချက်အလက် တွေနဲ့ Certificate ထုတ်ပေးရမယ် ။ ခုချိန် လောက်ဆို သူနောက်တမျိုး ကြံ နေလောက်ပြီ ။ ကျွန်တော့ ဆီကို လာပြီး မေးမြန်းစုံစမ်းရင်း ဆိုင်ရာကနေ ရပ်တည် ပေးမဲ့ လူတွေလည်း တိုးလာတယ် ။ သူ မသိအောင် သူ့လူ တွေကို ရှောင်ပြီး နောက်မဆုတ်တမ်း သတိထားပြီး ကျွန်တော် လုပ်ကိုင်နေပါတယ် ။ ကျွန်တော့ အတွက် စဉ်းစား စိုးရိမ် ဆုတောင်း ပေးကြတဲ့ အရီး နဲ့ ရွာသူ/သား အားလုံး ကို ကျေးဇူး အထူး တင်ရှိပါတယ် ခင်ဗျ !
ဟုတ်ကဲ့ ကိုဗိုက် ရေ ! ခုချိန် က ကြိုးတန်း လမ်းလျှောက် နေရသလို ပါပဲ ! ဝိတ် ချင်း မတူလို့ အကြောက်တရား မရှိပေမဲ့ စိတ် လှုပ်ရှားမှုတော့ နည်းနည်း ရှိတယ် ။ သတိ ထားနေပါတယ် ! ကျေးဇူး ပါ ကိုဗိုက် ရေ !
မိမိလုပ်နေတာတွေဟာ ပိုင်ရှင်အတွက်ဆိုတာ သူသိဖို့
ရဲရဲရင့်ရင့် ရင်ဆိုင်ပါဗျာ။အမှန်တရားဟာ အမှားတရံမဖြစ်သရွေ့ ခင်ဗျားမရှူံးပါဘူး။သတ္တိရှိရှိ အမှန်အတိုင်းလုပ်ပါ။
@Myanmar Oscar နဲ့ ကိုမိုးတိမ် ရေ လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော့ လက်တော့ ကို ပိတ်ပစ်လိုက်ပြီ ! ခု သူများ လက်တော့ ကို သုံးပြီး ရေးနေတာ ။ ဌာန လူကြီး နဲ့ ရုံးနဲ့ တိုက်ရိုက် ရှင်းနေပါပြီ ! အားလုံး ပြီးသွားရင် အကျိုး အကြောင်း ပြောပြပါဦးမယ် ! ကျေးဇူး တင်ပါတယ် !